Iapile ifumana iBeddit, ubuvulindlela bokuQala ukuKhangela ukuKhangela okuQalayo | Ndisuka mac
Kuqhelekile ngoku ukuthetha ngeApple njengenkampani efuna kwaye ithenge italente, kwihlabathi liphela. Le yinto eyenzekileyo kwakhona kwinkampani encinci yaseYurophu ebizwa Ibhedi, ezizodwa kuhlalutyo lokulala, ekwabizwa ngokuba yi "sleep tracker", kusetyenziswa isixhobo esikrelekrele nesilula.
Inkampani yaseFinland, ezise izixhobo ezahlukileyo kwintengiso, ngoku ibine Indawo yokulala ebekwe esweni, ibhendi encinci efakwe ebhedini yethu kwaye inxibelelana ngokuthe ngqo ngesixhobo sethu sokulandela umkhondo, nokuba yi-iPhone okanye i-Apple Watch, ukwazi imikhwa yethu yokulala kwaye sikwazi ukwenza ngayo, Ukuvumela ukuba sisebenze kwidatha efunyenweyo ukufezekisa ukuphucuka okubonakalayo ekusebenzeni kwethu kokulala.
Ukuqalisa uxelwe namhlanje ekufunyanweni yi-Apple, ikwacebisa abathengi bayo ukuba, ukusukela ngoku, Idatha yabathengi iya kuba phantsi komgaqo-nkqubo wabucala we-Apple.
Inxalenye ebalulekileyo yokufumana, yisoftware eyenziwe liqela laseFinland ukuhlalutya ubuthongo ngokuchanekileyo, into ngokuqinisekileyo iApple eya kufuna ukuyifaka kuhlelo lwayo lwezixhobo zayo.
Kubonakala ngathi, kwikamva le Ibhedi into efana nale xa iApple ithenge iiBeats iyakwenzeka: uphawu olunjalo luya kubonakala ngoluhlobo, kanye njengoko ii-Beats zibonakala zinjalo namhlanje, kuphela kukuba i-Apple iqalile ukuthengisa iimveliso zayo kwiiVenkile ze-Apple ezinazo kwihlabathi liphela. Ukongeza, iApple isebenzisa ithuba kwaye iza kusebenzisa amalungelo awodwa omenzi wechiza ukuba le nkampani kufuneka iphucule amanqaku epotifoliyo yemveliso yenkampani yaseMntla Melika.
Ukulungiswa ngokupheleleyo kwetekhnoloji entsha efunyenwe ngabafana baseCupertino kubonwe kwangaphambili kwicandelo leKhayaKit Ukusuka kwiApple, iyafumaneka kwizixhobo ezininzi nangakumbi ezivela kwinkampani yaseCalifornia.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UApple ufumana iBeddit, ubuvulindlela bokuqalisa ukulandela umkhondo wokulala
IMafia III isungula ngomso kubasebenzisi beMac